Power Sare CO2 Glass Laser Tube
Stability: tube dheecaan ayaa laga sameeyey oo frit galaas laga keeno Germany, iyo tayada tuubada galaas oo dhan waa controllable.
Power: US hollyland total muraayadaha iyo muraayadaha saarka waxaa loo isticmaalaa. Awoodda ugu sarreeya waa 190 watts, iyo cufnaanta awoodda wax soo saarka waa heer sare ah.
Cimri dheer: tube The dheecaan dahaarka leh kula Hannaan, weheliso koronto ku dhaqmin habka gaarka ah, ka dhigaysa dheecaan ka badan oo deggan iyo nolosha adeegga ilaa 10,000 oo saacadood waa.
Spot: Qaabkadhismeedka saabka Xasilloon, urursan, deggan, oo tayo fiican leh, sida hannaankii kaalinta uniform iyo oolnimada sare.
Geedi socodka: line alxanka Shayga gebi shaabad in jaakada biyaha dhoobada, si buuxda qalabada hawada, wax ku ool ah ka hortagga taasoo-kar.
muraayad tube laser The hagaajinaysaa jaakada biyaha biyo-qaboojiyey dhoobada, oo muraayad wax soo saarka la isku aadiyo la jaakada biyo copper nidaamka qaboojinta biyaha, taas oo wax ku ool ah oo yaraynaysa heerkulka siku iyo aad bay u cimrigay dheeraysaa nolosha adeeg ee tube laser ah ee.
dusha koronto, dahaadhay gaar ah! daaweynta dusha koronto Wageyska qaadanayaa ku dahaadhay biraha gaar ah si ay u gebi ahaanba la baabi'iyo sputtering electromagnetic iyo wasakhda gashto, si wax ku ool fidinayo nolosha adeeg ee tube laser ah. Hore iyo xagga dambe gashto cover qaboojinta, farsamo gaar ah! - cover habka lagu qayilo dusha Heat-guraysay, waxqabadka ningax-oolnimada sare, hoos u dhigidda dheecaan dhalisay.
model Length (mm) Dia (mm) Power lagu qiimeeyo (w) Max xoog (W) Hadda (MA) Hannaan
B20 1250 ± 20 Φ60 ± 2 80 95 28 Haa
B21 1250 ± 20 Φ80 ± 2 80 95 28 Haa
B40 1450 ± 20 Φ60 ± 2 100 120 30 Haa
B41 1450 ± 20 Φ80 ± 2 100 120 30 Haa
B60 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Haa
B61 1650 ± 20 Φ60 ± 2 130 150 30 Haa
Tilmaamaha isticmaalka laser CO2
Waxaan .xaalad shaqaynta
qaboojinta Water: isticmaalaya biyo sifaysan, heerkulka biyaha: 10 ℃ -40 ℃.
deegaanka ka hawlgala: Heerkulka 2-40 ℃; qoyaan 10-60%.
Shaqeynta hadda: shaqada ugu badan ee hadda waa 32mA. hadda socda waa in hoos 30mA lagu hayaa. nolosha Tube gaari karo 10,000 oo saacadood haddii hadda waa la hayaa hoos 28mA. ammeter waa in lagugu xiro koronto taban ee laser tube.When waxaa ku hoos shaqeeya in ka badan-sare ee muddo dheer, baallaha negative heli doontaa guduud, iyo nolosha si degdeg ah loo gaabin doonaa.
Si loo ilaaliyo boodhka ka soo galkeeda ningax ah, fadlan ku duub la bac.
II . Performance shaqaynta
Ha u nadiifiso dusha bannaanka muraayada carmal saarka qalabka sida suufka, haddii kale awood wax soo saarka si daran u saameeyeen doonaa. ka dib waa hab loogu talagalay nadiifinta wasakhda ee dusha sare ee bannaanka ka mid ah muraayad suuqa kala:
1) Marka muraayad waxaa nijaaseeyey, ha u jeedin on laser ah.
2) afuufa dusha muraayadda dhinac la hawo ah.
3) Buufiyo khamriga saafiga dushiisa muraayad la sprayer ah.
4) Daar laser ka dib markii khamri ah uu si buuxda u volatilized.
5) Haddii hababka kor ha ku ool ah u shaqeeyaan, waxaa lagama maarmaan ah in aad weydiisato xirfadeed si ay u isticmaalaan suufka aalkolo si aad u nadiifiso dusha muraayad ka dhexe ilaa qarka. Xalka ugu wanaagsan waa in laga hortago daaqadda ka nijaas ah.
Attention: waxaa reebban in la nadiifiyo muraayada la acetone.
fur ee hore iyo dib ugu shishaysa ee tube laser ah lama oggola in la dhaqaajiyo, haddii kale awood ah dibaddaa lagu diiday doonaa, xataa tuubada waa la burburinayaa.
Ku rid 300mm acryl ka fog muraayad wax soo saarka, marka tijaabinta kaalinta laser ah.
dogob laser waa iftiin aan la arki karin. Fadlan xidhaan muraayadaha ilaaliya marka debugging laser ah. baallaha wanaagsan waa in danab sare. Fiiro gaar ah u marks ammaanka.
V. deji qaboojinta dareere ay dhacdo of kaydinta iyo gaadiidka, iyo dabooli terminal saarka kolay Carro-caddayn caag ah. deegaanka kaydinta waa 2-40 ℃, iyo huurka ee la codsaday yahay 10-60%. Boorso laser ah sidii qoraalada way.Important asalka ah, waxaa laga codsanayaa in ay wada adkeeyo geed isbonji la tube laser si looga hortago in tuubada vertical saraysa inta lagu guda jiro gaadiidka. isbonji ee dhinaca muraayad wax soo saarka waa in ay ahaadaan 70 mm waxa ka shisheeya, iyo geed isbonji ee dhinaca ka tarjumaysa muraayad waa in ay ahaadaan 50 mm ballaaran.
1325 Laser magaabay
20w Fiber Laser xardho Machine
3D Laser Crystal xardho Machine
3D Laser xardha
3D Laser xardho Machine
3D Laser Glass xardho Machine
40w 50w Laser xardho Machine
6040 Laser xardho Machine
Auto Quudinta Machine Laser
Baasaboorka farshaxan Laser xardho Machine
Best Machine Iibinta
Cheap DIY CNC Laser magaabay
Machine Chinese Iyadoo Bed Cast Goo Sliver
Name Tag xardho Machine
Portable Laser xardho Machine
Portable Birta Laser xardho Machine
Stamp Rubber Laser xardho Machine
Ahama Steel Birta Laser Goo
Machine Making Stamp
Stone xardho Machine
Xaalabaha xardho Machine
USB Port xardho Machine
Wood Laser xardho Machine
Wood Qalinka Laser xardho Machine
Sida loo doorto tube laser CO2
Waxyaabaha: asal ahaan tube laser CO2 ayaa tube galaas (oo ay ku jiraan tube dheecaan), muraayad, biyo-c ...
Noocyada kala duwan oo ka mid ah lenses laser
Laser diiradda mirror.There jira laba nooc oo gudaha iyo dibadda laga keeno iyo muraayadaha diiradda. TRA ayaa ...